ဆယ်ကျော်သက်တို့ရဲ့ သေမင်းတမာန် - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 13, 2020 Wiriyaporn Chanrachakul, M.D.
လိင်မှုဆိုင်ရာပညာပေးခြင်း အားနည်းတဲ့အတွက် လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်ခဲ့သော ဝေဒနာရှင်တွေရဲ့ ၃၆.၉% ဟာ ဆယ်ကျော်သက်တွေ ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
စနစ်တကျကုသမှု မရှိတဲ့အတွက် ဒီ ကာလသားရောဂါကြောင့် မျက်စိကွယ်ခြင်း၊ နားပင်ခြင်း၊ မျက်နှာသွင်ပြင် ပုံပျက်သွားခြင်း၊​ မှတ်ဉာဏ်များပျောက်ဆုံးသွားခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ ခံစားရခြင်း စတာတွေအပြင် ကိုယ်တစ်ပိုင်းသေခြင်း၊ မသန်မစွမ်း ဖြစ်သွားခြင်း၊ တကယ်လို့ ကူးစက်မှုဟာ နှလုံးအထိ ရောက်သွားမယ်ဆိုရင် နှလုံးပျက်စီးပြီးတော့ သေဆုံးခြင်းတွေအထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လိင်မှုရေးရာကို အကာကွယ်မဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ် ဆိုရင် ရောဂါလက္ခဏာ ပြပြ မပြပြ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုကို နှစ်စဉ် ခံယူသင့်ပါတယ်လို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
“ခုတစ်လော ကာလသားရောဂါကို ပြန်တွေ့နေရတယ်” ဆိုတဲ့ သတင်းကို ကြားလိုက်ရတော့ တကယ်ကို အထိတ်တလန့် ဖြစ်ရပါတယ်။ အထက်တန်း နဲ့ တက္ကသိုလ်အရွယ်တွေ (၁၅ ကနေ ၂၄ နှစ်အတွင်း) တွေမှာ ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်နေတာ တဲ့။ . (Link: www.bbc.com/thai/thailand-48199586)
လက်ရှိဖြစ်နေတာကတော့ လူငယ်ပိုင်း အသက် ၁၅ နှစ်ကနေ ၂၄ နှစ်ကြား၊ အထက်တန်း နဲ့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားအရွယ်တွေပေါ့။ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဒီအရွယ် ကာလသားတွေဆိုတာက စမ်းချင်တယ်လေ။ အထူးသဖြင့် လိင်မှုရေးရာ အတွေ့အကြုံ မှာ “ပထမဆုံး” ဆိုတာ ဘယ်လိုနေပါလိမ့် လို့ စမ်းကြတယ်လေ။ လိင်ပညာပေးတဲ့အပိုင်းမှာလည်း အားနည်းခဲ့တယ်။ ဘဝမှာ ပထမဆုံးလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေခွင့်ရတယ် ဆိုတော့ကာ… အထူးသဖြင့် လိင်မှုရေးရာမှာ တစိမ်းတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ တစ်ညဖြစ်ဖြစ် စမ်းကြည့်လိုက်ကြတော့တာပါပဲ။ ပိုဆိုးစေတာက ကွန်ဒုံး မသုံးချင်ကြဘူး တဲ့။ သူတို့ ခံယူချက်မှားနေတာက ဆက်ဆံဖော်မများဘူး။ ဒီတစ်ယောက်ထဲနဲ့ပဲဆိုရင် ဘာ ပိုးမှ ကူးစရာမရှိပါဘူး ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒါကြောင့်လည်း လုံလောက်တဲ့ အကာအကွယ်တွေ မလုပ်ကြဘူးလေ။ အမှန်တကယ် သိထားရမှာက ကွန်ဒုံးမသုံးလိုက်ဘူးဆိုရင် နှစ်ယောက်စလုံးမှာ လိင်မှတစ်ဆင့် ဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ ရောဂါ ကူးစက်နိုင်ချေ ရှိသွားပြီ ဆိုတာပါပဲ။
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အန္တရာယ်ရှိ အုပ်စုထဲမှာ ထပ်ထည့်ဖို့ ရှိသေးတယ်။ မိခင်ကနေတစ်ဆင့် သန္ဓေသားဆီကို ကာလသားရောဂါပိုး ကူးတာ။ သန္ဓေသားအဆင့်မှာ ရေမွှာအရည်ထဲကနေ အကူးခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။ နှာခေါင်းကွဲ အာခေါင်ကွဲလေးတွေ မွေးလာတာ၊ မျက်လုံးမမြင်တာ၊ ဦးနှောက်အရွယ်အစားသေးနေတာ၊ နှလုံးမကောင်းတာကြောင့် သေဆုံးရတာ စသည်ဖြင့် အမျိုးစုံ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကာလသားရောဂါဆိုတာ Treponema pallidum ဆိုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ ကူးစက်မှုကနေ ဖြစ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက္ခဏာပြဖို့ ၂-၃ ပတ်ကနေ ၃လ အထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ စိုနေတဲ့အပိုင်းတွေမှာ ရှိနေတတ် ကြပါတယ်။ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တယ်ဆိုရာမှာ လိင်ဆက်ဆံရာကနေ တိုက်ရိုက်ကူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ကနေ သန္ဓေသားဆီကိုလည်း ကူးစက်ပါတယ်။
ကာလသားရောဂါဟာ အရင်ခေတ်တုန်းက ကြောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့အဆင့်တစ်ခုအထိ ပျံ့နှံ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီရောဂါရဲ့ တတိယအဆင့်လောက်အထိ ရောက်သွားပြီဆိုရင် မျက်စိကွယ်တာတို့ မျက်နှာပျက်သွားတာတို့ စတာတွေ ဖြစ်တတ်ပြီး ပြင်းထန်တဲ့ အဆင့်ဆိုရင် ဗဟို အာရုံကြောမကြီးစနစ်ကို ထိခိုက်သွားပြီး မှတ်ဉာဏ်ပျက်စီးတာတို့ ဘာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ စနစ်တကျ ကုသမှု မခံယူဘူးဆိုရင် အသက် သေဆုံးတဲ့အထိ ဒုက္ခပေးပါတယ်။
ကာလသားရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေကို အောက်ပါအတိုင်း အဆင့် ၄ ဆင့် ခွဲပါတယ်။
အဆင့် ၁ လိင်အင်္ဂါတစ်ဝိုက်၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ နို့သီးခေါင်း စတဲ့ နေရာလေးတွမှာ ၂ ကနေ ၄ မီလီမီတာလောက် ရှိတဲ့ အနာလေးတွေ ပေါက်လာပြီး တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ အနာတွေဖြစ်လာတာ။ မနာပေမယ့် မကုဘဲ ပစ်ထားလိုက် ရင် ပေါင်ခြံမှာရှိတဲ့ ပြန်ရည်ကြောအကြိတ် (lymph nodes) တွေကို ရောက်သွားပါတယ်။ ဒီအဆင့်အထိ ရောဂါလက္ခဏာ မပြတတ်သေးတဲ့အတွက် လူနာတွေဟာ သူတို့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီး သူတို့ရဲ့ ရောဂါ ကူးစက်ခံရမှု အတိမ်အနက်ကို လျှော့တွက်လေ့ ရှိကြပါတယ်။
အဆင့် ၂ – ၂ ပတ်ကနေ ၃ ပတ်လောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာတာ့ ကူးစက်မှုရဲ့ အစပိုင်းအဆင့်ကို ရောက်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကာလသားရောဂါ ဆစ်ဖလစ်ပိုးဟာ ပြန်ရည်ကြောအကြိတ် (lymph nodes) တွေကနေတစ်ဆင့် သွေးလှည့်ပတ်မှုလမ်းကြောင်းထဲကို ရောက်သွားပါတော့တယ်။ အဖြေကတော့ တစ်ကိုယ်လုံးကို ပျံ့နှံ့သွားပြီ ဆိုတာပါပဲ။ လက်ဖဝါး ခြေဖဝါးတွေမှာ အရင် ပြပါတယ်။ အနာတွေ ဖြစ်လာပေမယ့် မယားပါဘူး။ ဒီအဆင့်ကို flowering period (ပန်းတွေပွင့်တော့မှာမို့ အဖူးလေးတွေဖူးလာတဲ့အဆင့်) လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ လူနာတွေမှာဆိုရင် ဆစ်ဖလစ်အနာတွေက စိုနေပြီး အရည်တွေ တရွှဲရွှဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်၊။ ဒါကြောင့် ဒီအဆင့်ဟာ အခြားတစ်ယောက်ဆီကို ကူးစက်ဖို့ အလွယ်ဆုံးအဆင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကျပြန်တော့လည်း ဒီအဆင့်အထိ ဘာလက္ခဏာမှ မပြဘဲ ကိုယ်နည်းနည်းပူပြီး ဖျားတာလောက်၊ လည်ချောင်းနာပြီး တစ်ကိုယ်လုံးကိုက်တာခဲတာလောက်ပဲ ဖြစ်တတ်တာလဲ ရှိပါတယ်။ ကာလသားရောဂါပိုးဟာ ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ နှစ်အတန်ကြာ ခိုအောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ သွေးစစ်လို့ သိရတဲ့အချိန်မှာတော့ ရောဂါဟာ တော်တော်မြင့်နေလောက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် ၃ ဒီအဆင့်ကတော့ ရောဂါ ငုပ် နေတဲ့အဆင့် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာလည်း ရောဂါလက္ခဏာ မပြသေးပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ကနေ သန္ဓသားဆီကို ကူးစက်နိုင်ချေ အများဆုံးအဆင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် ၄ ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ ဒီရောဂါ ကူးစက်မှုဟာ ၂ နှစ်ကနေ နှစ် ၃၀ အတွင်းမှာရှိပြီး သေသေချာချာမကုဘူး ဆိုရင်တော့ ကာလသားရောဂါ ဆစ်ဖလစ်ဟာ ကိုယ်လက်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို ဖျက်ဆီးတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိကွယ်မယ်၊ နားပင်းမယ်၊ မျက်နှာသွင်ပြင် ပျက်စီးမယ်၊ မှတ်ဉာဏ်တွေ လျော့ပါးမယ်၊ စိတ်ကျန်းမာရေး ချွတ်ယွင်းမယ်၊ ကိုယ်တစ်ပိုင်းသေတာတို့ မသန်မစွမ်းဖြစ်သွားတာတို့ စတာတွေ ဖြစ်မယ်။ ဆက်ပြီး ပစ်ထားမယ် ဆိုရင်တော့ နှလုံး ပျက်စီးပြီး အသက် သေဆုံးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကုသမှု နှင့် ကာကွယ်ရန်
လိင်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် ကွန်ဒုံးသုံးပါ။
လိင်ဆက်ဆံဖော် အများကြီးမထားပါနှင့်။ ဆစ်ဖလစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရသူများနှင့် လိင်ကိစ္စ မဆောင်ရွက်ပါနှင့်။
လိင်မှုကိစ္စ ပြီးသည့်နောက် လိင်အင်္ဂါတွင် အနာများ ပေါက်လာပါက ဆရာဝန်နှင့် အမြန် ပြသပြီး ကုသမှု ခံယူပါ။
ဆစ်ဖလစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံရပြီဆိုသည်နှင့် လက္ခဏာ ပြသည်ဖြစ်စေ၊ မပြသည်ဖြစ်စေ ဆရာဝန်နှင့် မှန်မှန်ပြပါ။ ရက်ချိန်း မှန်မှန်သွားပါ။ အချိန်မီမကုသဘူးဆိုလျှင် ထိုရောဂါပိုးသည် သွေးထဲသို့ ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
ထိုရောဂါအတွက် ပေးနေကျဆေးကတော့ ပင်နီဆလင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးမှန်မှန် ထိုးနေဖို့ လိုပါတယ်။ ဆေးကုသမှု မအောင်မြင်ရခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ ဆေးပတ်လည်အောင် မှန်မှန် မထိုးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ ဆေးပညာနယ်ပယ်ဆိုတာ အစဉ်အမြဲ တိုးတက်နေတာမှန်ပေမယ့် ကာလသားရောဂါ ဆစ်ဖလစ်ဟာ ဒီနေ့ထက်ထိ အသံတိတ်ခြိမ်းခြောက်နေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတာကတော့ ဘယ်သူမပြုမိမိမှု ဆိုတာလို လူတွေကိုယ်တိုင်က လိင်မှုရေးရာမှာ ကွန်ဒုံးမသုံးတာ၊ ဆက်ဆံတဲ့ အဖော်တွေ အများကြီးထားတာ၊ သေသေချာချာမရွေးတာ၊ အစီအစဉ် မရှိဘဲ လိင်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်တာ၊ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေတဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပုံမှန်မစစ်ဆေးတာ စတာတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် အကြောင်းတရားတစ်ခုကတော့ ဒီရောဂါပိုး ရှိနေပြီး ရောဂါကျွမ်းတဲ့အထိ လက္ခဏာမပြတော့ လူကောင်းလိုပဲ နေထိုင်ကြရင်း မသိလိုက်ဘဲ တခြားသူတွေဆီကို ကူးစက်သွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်… လိင်မှုကိစ္စကို အကာအကွယ်မဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ရောဂါလက္ခဏာ ပြသည်ဖြစ်စေ မပြသည်ဖြစ်စေ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါများဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများကို နှစ်စဉ် မှန်မှန် ပြုလုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကာလသားရောဂါ ဆစ်ဖလစ်နာ ဆိုတာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပေမယ့် ပျောက်ကင်း အောင်မြင်အောင် ကုသလို့ ရပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်တို့ရဲ့ သေမင်းတမာန် “ခုတစ်လော ကာလသားရောဂါကို ပြန်တွေ့နေရတယ်” ဆိုတဲ့ သတင်းကို ကြားလိုက်ရတော့ တကယ်ကို အထိတ်တလန့် ဖြစ်ရပါတယ်။ အထက်တန်း နဲ့ တက္ကသိုလ်အရွယ်တွေ (၁၅ ကနေ ၂၄ နှစ်အတွင်း) တွေမှာ ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်နေတာ တဲ့။ .
User rating: 3.16 out of5with 19 ratings